Shirkadda Google oo ku hagi doonto dhanka arimaha sirtaada oo online ka la xariira. – Fatuux Tech
Shirkadda Google oo ku hagi doonto dhanka arimaha sirtaada oo online ka la xariira.
Fatuux Cade	Tech News	 November 1, 2018 1 Minute
Qeyb ka mid ah cusbooneysiinta Google dhanka security ga waxey ku dartay qeyb kuu sheegi doonta markii aad la wadaagi doonto xogtaada gacan sadexaad (Third-party), sidoo kale hadey ka shakiso in la dhacay account kaaga waxey si dhaqsi fariin ugu soo direysaa E-mail ka ama Tell ka aad ka dhigatay Recovery in wax laguugu ogeysiiyo.
waxaad u baahnaan doontaa inaad hubiso account kaaga adigoo siinaayo Tell ama E-mail oo lagaga soo xariiro aadna ka xiran karto haddii ay dhacdo in la dhaco account gaaga, sidoo kale waxey ku marin doontaa talaabada ugu danbeysay oo ah inaad hubsato account kaaga dhaqaale oo Google pay in la dhacay ama wali uu nabad qabo waa haddii aad leedahay.
-Fatuux Cade @fatuxcade.
Previous Post IBM oo la wareegtay Red Hat qiima gaareysa $33.4 Billion.
Next Post U guurida dhanka teknooloojiyadda.